Cyber Enable Crime and Cyber Dependent Crime
Electronic Crime, E-Crime, Technology Enable Crime Hi-Tech Crime ,Computer Crime, Computer Related Crime, Cyber Space Crime ဘယ်​လိုပဲ​ခေါင်းစဉ်​သည်​ဆိုပါ​စေ .. ဒါ​တွေနဲ့ပတ်​သက်​ဆက်​နွယ်​​နေတာ​တွေက မှုခင်းအမြင်​တစ်​ခုနဲ့ တင်​ကြည့်​ရှုလို့မရနိုင်​ပါဘူး ဥပ​ဒေ​​ရေးရာ လူ​တွေရဲ့ စိတ်​​နေသ​ဘောထားနဲ့ပတ်​သတ်​တာ​တွေ စီးပွား​ရေးနိုင်​ငံ​ရေးနဲ့ပတ်​သတ်​တာ​တွေကိုပါ ကြည့်​ရှုရမှာဖြစ်​ပါတယ်​.Non Border ဖြစ်​​နေတဲ့အတွက်​​ကြောင့်​ဖြစ်​ပါတယ်​. အရင်​တုန်းက ဥပ​ဒေအရ ​ယေဘူယျ ၃ မျိုးခွဲခြားထား ပါတယ်​ (နိုင်​ငံအရ မတူနိုင်​ပါ) Computer ကို တစ်စိတ်တစ်​​ဒေသအသုံးချပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်​ခြင်း Computer ကိုကြားခံ အသုံးချပြီး ပြစ်​မှုကျူးလွန်​ခြင်း (ကြားခံ Computer မသိနိုင်​တာလည်းရှိနိုင်​ပါတယ်​) Computer ကို အသုံးချပြီး ပြစ်​မှုကျူးလွန်​ခြင်း ​နောက်​ထပ်​ ၂၀၀၆ ခုနှစ်​မှာ Gordon နဲ့ Ford ခွဲခြားထားတာက​တော့ Type 1 နည်းပညာကို ပုံမှန် ​သုံးစွဲ​နေကြအတိုင်းမဟုတ်​ပဲ ပုံမှန်​ထက်​ပိုအသုံချကာ ပြစ်​မှုကျူးလွန်​ခြင်း Eg. Hacking Methods Type2​နည်းပညာကို သုံးစွဲ​နေကြ ပုံမှန်​အတိုင်း သုံးစွဲ​ပြ
Digital Forensics Report (အကျဉ်းချုပ်)
- မှုခင်းဖြစ်ရပ်ကို ပြည့်စုံစွာတင်ပြခြင်း ဘယ်လိုဖြစ်ပွားတယ် ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ် ဘယ်လိုလုပ်တယ် (What , where who,When,How) What ဘယ်​လိုအမှုမျိုးလဲ Where ဘယ်​​နေရာမှာ ကျူးလွန်​တာလဲ Who ဘယ်​သူက ကျူးလွန်​နာလဲ When ဘယ်​အချိန်​မှာ ကျူးလွန်​တာလဲ How ဘယ်​လိုပုံစံနဲ့ကျူးလွန်​တာလဲ What ​​ Cyber Crime Case ထဲက ဘယ်​လိုအမှုမျိုးလဲ အမှုအ​နေအထားနဲ့ ဖြစ်​ရပ်​ကိုကြည့်​ခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​ Where မှုခင်းဖြစ်​တဲ့​နေရာမှာ or အနီးတဝိုက်​မှာ ​ကျူးလွန်​တာလား or အ​ဝေးက​နေ ထိန်းချုပ်​ကျူးလွန်​တာလား ဘယ်​​နေရာက​နေ ကျူးလွန်​တာလဲ Who ဘယ်​သူက ကျူးလွန်​တာလဲ ​တစ်​​ယောက်​ထဲဖြစ်​နိုင်​လား ပူး​ပေါင်းမှုပါသလား (အမှုအ​နေအထားအရ) How ဘယ်​လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကျူးလွန်​တာလဲ ကျူးလွန်​တဲ့အခါ case ပုံစံအရ တစ်​​ယောက်​ထဲက ကျူးလွန်​နိုင်​တာလား ပူး​ပေါင်းသူပါဝင်​ပါက ဘယ်​လိုကျူးလွန်​နိုင်​မလဲ ======================== - နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စကားလုံးများကို ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပဲ လူအများနားလည်အောင်ရေးသားခြင်း - လိုအပ်ပါက နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စကားလုံးများ၏ ရှင်းလင်းချက်ကို နောက်ဆက်တွဲပုံစံဖြင့်ဖော်ပြခြင
Digital Forensics ( Written By U Tin WIn Hlaing)
His Facebook Link https://www.facebook.com/tinwinhlainglim
Digital Forensics Lab တဈခုတညျထောငျခွငျး
Planning အပိုင်း Planning အပိုင်းမှာတော့ Digital Forensics လုပ်ငန်းထဲက ဘယ်အပိုင်းကို အဓိက ထားလုပ်မှာလဲ ဆိုတဲ့အပိုင်းပါ ဥပမာ Mobile Forensics အပိုင်းလား Computer Forensics အပိုင်းလား အဓီကထားတဲ့ အပိုင်းအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ - Forensics Work Station - Computer , Laptop Or Workstation (ရုံးလုပ်ငန်းအတွက်နှင့် Evidence Storage အတွက်) -UPS , Internet, Intranet , - Forensics အတွက်လိုအပ်တဲ့ Special Hardware Software - Reference စာအုပ် စာကြည့်တိုက် -သက်သေခံအစ္စည်းတွေထားဖို့အတွက်နေရာ ထားရှိမဲ့အစီအစဉ် - Work Station တွေ ကွန်ပျူတာတွေအတွက် လိုအပ်မည့် အပိုပစ္စည်း များ - သက်သေခံပစ္စည်းဖျက်ဆီးခြင်းအပိုင်း - သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းအလိုက် စစ်ဆေးမဲ့သူတွေ Budget အပိုင်း အထက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့ ကုန်ကျမဲ့ ငွေ အကျဉ်းဖျဉ်းရရှိလာမှာပါ အသုံးပြုမဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လိုင်စင်ကြေး၊ လိုအက်တဲ့သင်တန်းတွေအတွက် ကုန်ကျငွေပါ ပါဝင်ရပါမည်။ အဆောက်အဦး အပိုင်းကတော့ Work Station Server တွေအတွက် အအေးပေးတဲ့စနစ်တွေ ၊ ရာသီဥတုနဲ့ မီးဘေးဒဏ်ကိုခံနိုင်ရန်၊ လေ၀င်လေထွက် စနစ်၊ ၀င်ပေါက်( တစ်ခုထဲသာထားရှိရမည်)